Guddigii farsamada ee dhismaha Hirshabeelle oo 5 xubnood u gartay Dumarka | Xorriya Online
Home Maxaa Cusub Guddigii farsamada ee dhismaha Hirshabeelle oo 5 xubnood u gartay Dumarka
Guddigii farsamada ee dhismaha Hirshabeelle oo 5 xubnood u gartay Dumarka
Guddigii farsamada ee dhismaha maamulka dowladda goboleedka Hirshabeelle ayaa xalay si lama filaan waxay ugu dhawaaqeyn liiska xildhibaanada baarlamaanka 2-aad ee Hirshabeelle, iyagoona 5-xubnood oo keliyah Dumarka ka siiyay 90-kii Xildhibaan oo ay soo magacaaban.
Liiska & magacyada xildhibaannada cusub ee baarlamaanka 2-aad ee DG Hirshabeelle ayaa lagu qaybiyay hab-qabsiga beelaha Hiiraan & Shabeelaha Dhexe sida xubnaha Guddiga farsamadu ay sheegeen.
Liiska waxaa dib ugu soo laabtay qaar kamid ah Xildhibaannada shaqeynayay 4-tii sano ee lasoo dhaafay, halka laga waayay xubinnimada baarlamaan guddoomiye Cismaan Barre & Maxamed Xuseen Geedi oo ku xigeen u ahaa.
Guddoomiye ku xigeenkii baarlamaanka waqtisiiu dhamaaday 7-dii Oktoobar 2020 Canab Axmed Ciise ayaa dib u heshay xildhibaannimadeeda, waxaana ay shaneysay afar dumar oo baarlamaanka lagu soo daray.
Madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday 17-kii Oktoobar 2020 ee Maxamed Cabdi Waare oo horay u magacaabay guddigaan farsamo ayaa kahor yimid tallaabadii 1-aad ee guddiga kadib markii uu shaaciyay jadwalka xareynta ergada & ku dhawaaqista baarlamaanka labaad.
Waare ayaa sheegay in uu qabyo yahay guddiga, maadaaama liiska haweenka aan ku jirin, markii uu magacaabista sameynayay waxaa ka dhega fureystay xubnaha guddiga oo guda galay howshooda.
Dhismaha DG Hirshabeelle waxaa hareeyay buuq dhanka siyaasadda ah, magaalada Jowhar waxaa tagtay ergo kooban sida Xorriya.com ay kasoo ilo kala duwan oo ku sugan Jowhar.